စက်တင်ဘာလ(၂) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင် - MM Live News
ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။၁-၉-၂၀၁၉ / ည(၉း၀၀)နာရီ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်…..
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် အ ခြေ အ နေ…..
(၁ -၉-၂၀၁၉)ရက် နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီအချိန်KALPANA_1 ဂြိုဟ်တုမှတိုင်းတာပေးချက်အရ၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော် တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့် မှ တ်ိမ်ထူထပ် နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဒေသ တွေမှာ တိမ် အသင့်အတင့် မှ တ်ိမ်ထူထပ် နေပြီး၊ကျန်ဒေသ တွေမှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ် ထွန်း နေပါတယ်။
အ နောက်တောင် မုတ်သုံလေ အ ခြေ အ နေ….
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင် ပိုင်း တို့မှာ မုတ်သုံလေ အားအလွန်ကောင်း နေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တွင် မုတ်သုံ‌လေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အ ခြေ အ နေ…
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္ထမ ကွေ- မွန်- တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်း လွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ လှိုင်းကြီးနိုင်ပြီး၊ကျန်မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ လှိုင်းအသင့်အတင့် ရှိပါမယ်။
လှိုင်းအမြင့် မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္ထမ ကွေ့၊ မွန်- တနင်္သာရီ ကမ်းရိုး တန်း နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ (၈) ပေ မှ (၁၅) ပေခန့်၊ ကျန်မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်း လွန်ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ (၃) ပေ မှ (၇) ပေ ခန့်ထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နေ့အပူချိန်များ အ ခြေ အ နေ….
ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တို့မှာ 23 °C မှ 28°C ခန့်၊ကျန်ဒေသတွေမှာ 29°C မှ 34°C ခန့်အထိ ရှိနိုင် ပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွှန်းကိန်းများ အ ခြေ အ နေ….
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်ဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်ဒေသကြီးး တို့မှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်း မြင့်မား အဆင့် တွင်ရှိနိုင်ပြီး၊ကျန်ဒေသ တွေမှာ အလွန်မြင့်မား အဆင့် တွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
တပြည်လုံးတွင် မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မ ကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် အလားအလာ ပိုများနိုင်ပါတယ်။
မိုးရွာသွန်းမှု အ ခြေ အ နေခန့်မှန်းချက်…..
တစ်ပြည်လုံး မှာ နေရာစိပ်စိပ် မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်း ရွာပါမယ်။
မွန်ပြည်နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ မိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာထွန်းလွင်
ကနျြးမာတျောမူကွပါစခငျဗြာ။၁-၉-၂၀၁၉ / ည(၉းဝ၀)နာရီ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ(၂) ရကျနေ့ အတှကျ မိုးလဝေသခနျ့မှနျးခကျြ…..
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတှငျ မုနျတိုငျးဖွဈနိုငျခွအေလားအလာ။ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောမွောကျပိုငျးတှငျ လထေုမငွိမျမသကျဖွဈနပွေီး၊ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးတဈခု ဖွဈပျေါနပေါတယျ။ အဆိုပါလဖေိအားနညျးရပျဝနျးဟာ ပိုမိုအားကောငျးလာကာ မုနျတိုငျးငယျတဈခုဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောနဲ့ တောငျတရုတျပငျလယျပွငျ အ ခွေ အ နေ…..
(၁ -၉-၂၀၁၉)ရကျ နံနကျ (၀၉းဝ၀) နာရီအခြိနျKALPANA_1 ဂွိုဟျတုမှတိုငျးတာပေးခကျြအရ၊ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျ နှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျ အျော တို့မှာ တိမျအသငျ့အတငျ့ မှ တျိမျထူထပျ နပေါတယျ။မွနျမာနိုငျငံ တောငျပိုငျး ဒသေ တှေမှာ တိမျ အသငျ့အတငျ့ မှ တျိမျထူထပျ နပွေီး၊ကနျြဒသေ တှေမှာ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈ ထှနျး နပေါတယျ။
အ နောကျတောငျ မုတျသုံလေ အ ခွေ အ နေ….
ကပ်ပလီပငျလယျပွငျ နှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျ ပိုငျး တို့မှာ မုတျသုံလေ အားအလှနျကောငျး နပွေီး၊ ကနျြဘင်ျဂလားပငျလယျအျော တှငျ မုတျသုံ‌လေ အားအသငျ့အတငျ့ ရှိနပေါတယျ။
မွနျမာ့ပငျလယျပွငျ အ ခွေ အ နေ…
မွဈဝကြှနျးပျေါ၊ မုတ်ထမ ကှေ- မှနျ- တနင်ျသာရီ ကမျးရိုးတနျး နှငျ့ ကမျး လှနျပငျလယျပွငျ တှေမှာ လှိုငျးကွီးနိုငျပွီး၊ကနျြမွနျမာ့ကမျးရိုးတနျး နှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျ တှေမှာ လှိုငျးအသငျ့အတငျ့ ရှိပါမယျ။
လှိုငျးအမွငျ့ မှာ မွဈဝကြှနျးပျေါ၊ မုတ်ထမ ကှေ့၊ မှနျ- တနင်ျသာရီ ကမျးရိုး တနျး နှငျ့ ကမျးလှနျ ပငျလယျပွငျ တှေမှာ (၈) ပေ မှ (၁၅) ပခေနျ့၊ ကနျြမွနျမာ့ ကမျးရိုးတနျး နှငျ့ ကမျး လှနျပငျလယျပွငျ တှေမှာ (၃) ပေ မှ (၇) ပေ ခနျ့ထိ ရှိနိုငျပါတယျ။
နအေ့ပူခြိနျမြား အ ခွေ အ နေ….
ခငျြးပွညျနယျ၊ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)၊ နှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး တို့မှာ 23 °C မှ 28°C ခနျ့၊ကနျြဒသေတှမှော 29°C မှ 34°C ခနျ့အထိ ရှိနိုငျ ပါတယျ။
ခရမျးလှနျရောငျခွညျအညှနျးကိနျးမြား အ ခွေ အ နေ….
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျ၊ပဲခူးတိုငျဒသေကွီး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ဧရာဝတီတိုငျဒသေကွီးး တို့မှာ ခရမျးလှနျရောငျခွညျ အညှနျးကိနျး မွငျ့မား အဆငျ့ တှငျရှိနိုငျပွီး၊ကနျြဒသေ တှေမှာ အလှနျမွငျ့မား အဆငျ့ တှငျရှိနိုငျပါတယျ။
တပွညျလုံးတှငျ မိုးတိမျတောငျမြားဖွဈပျေါနိုငျပွီး အထူးသဖွငျ့ကခငျြပွညျနယျ၊ စဈကိုငျးတိုငျး၊ မ ကှေးတိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျး၊ ပဲခူးတိုငျးမွောကျပိုငျး၊ဧရာဝတီတိုငျးတို့တှငျ အလားအလာ ပိုမြားနိုငျပါတယျ။
မိုးရှာသှနျးမှု အ ခွေ အ နခေနျ့မှနျးခကျြ…..
တဈပွညျလုံး မှာ နရောစိပျစိပျ မှ နရောအနှံ့အပွား မိုးထဈခြုနျး ရှာပါမယျ။
မှနျပွညျနယျ နှငျ့ ကရငျပွညျနယျတို့မှာ မိုးပိုလာနိုငျပါတယျ။ဒေါကျတာထှနျးလှငျ
ကံကြမ္မာဆိုတာမမြင်နိုင်တဲ့ သိန်း၁၅၀၀၀ဆုရှင်​ရဲ့ ဘဝ
(၄)ရက်ကနေ (၁၀)ရက်လောက်အထိမိုး ရွာနိုင်တဲ့ မုန်တိုင်းသတင်း….
March 28, 2019 MM Live
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ်သည် နောက်၂၄ နာရီအတွင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်နိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်ခန့် မှန်း
December 14, 2018 MM Live
ပါဘက်မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာမည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး…